Global Voices teny Malagasy » Mankalaza An’i Bob Dylan, Loka Nobel Literatiora, i Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Oktobra 2016 7:36 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, India, Nepal, Fifandraisana iraisam-pirenena, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Mozika, Vaovao Mafana, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Filoha Obama mampiseho an'i Bob Dylan miaraka amin'ny Medailin'ny Fahafahana, May 2012. NASA/Bill Ingalls. Sary azon'ny rehetra ampiasaina.
Ilay mpamoron-kira Amerikana Bob Dylan no nahazo ny loka Nobel ho an'ny Literatiora 2016 , izy no mpamoron-kira faharoa nahazo ny loka Nobel taorian'ilay Indiana, poeta sady mpamorona tononkira Rabindranath Tagore  izay nahazo ny loka Nobel tamin'ny 1913.
Nahazo mari-pankasitrahana i Dylan noho ny famoronany tononkalo vaovao ao anatin'ny hira nentim-paharazana Amerikana. Manana ambaindainy amin'ny mozika malaza sy ny kolontsaina ity lehilahy 75 taona mpiangaly mozika ity tao anatin'ny dimampolo taona mahery. Namorona ny ankamaroan'ny sangan'asany malaza nandritra ny fangotrangotrahan'ny taompolo 1960s izy; nalaza tanteraka ireo hirany tahaka ny Blowin’ in the Wind  sy ny The Times They are A-Changin’  nandritra ny Ady amin'i Vietnam sy ny hetsika zo sivily tao Etazonia.
Malaza tanteraka tao amin'ireo firenena Azia Atsimo ihany koa i Bob Dylan. Raha ny marina, dia tamin'ny 2009 ilay mpanoratra Indiana Nilanjana S Roy  no nanolo-kevitra tao amin'ny bilaogin'i Serdadis fa tokony hahazo ny loka Nobel i Bob Dylan:
Firy ny lalana tsy maintsy alehan'ny poeta vao mahazo Nobel izy? [..] Matetika raisina toy ny vazivazy ny vintan'i Dylan amin'ny Nobel; midika izany fa tsy mba hanome Loka ho an'ny mpamoron-kira, indrindra ho an'izay mahomby ny mpiambina mafy ny lazan'ny literatiora manerantany. Ary misy ny fanontaniana mikasika ny ho fihetsik'i Dylan amin'ny fandraisana ny Nobel, noho ny fankahalany ny akanjo mihaja sy ny kabary ofisialy.
Ny antony mahatonga an'i Dylan mendrika hahazo ny Nobel dia tsy misy ifandraisany amin'ny lazany, na hoe satria mbola voatsonga, iandian-kevitra sy miparitaka ny sangan'asany ankehitriny. [..]
Ny tohan-kevitra nisafidianana an'i Dylan dia noho ny kalitao sy ny ambaindain'ny sangan'asany nandritra ny taona maro, ary ny zava-misy fa lasa klasikan'ny tononkalo maoderina izy ireny ankehitriny, am-polony taona taorian'ny namoronany azy ireo voalohany. Tsy vitany hoe nanoratra hira tsara i Dylan-fa nanoratra hira izay niorim-paka lalina teo amin'ny tantaran'ny vanim-potoanany, sy teo amin'ny fomba amam-panao ara-mozika sy am-bava efa am-polo taonany.
Indiana maro no nankalaza ny fandresen'i Dylan tao amin'ny Twitter:
Fanina sy mirediredin'ny hafaliana! Nahazo ny loka Nobel Literatiora 2016 i Bob Dylan. Nahazo ny doladolan'ny enimpolo sy ny adaladalan'ny fitopolo…
Mendrika tamin'ny Nobel, Bob Dylan. Toy izao ny fomba fiarahabako!
Mahatsiaro  an'i Bob Dylan noho ny fandraisany anjara tamin'ny Fampisehoana ho an'i Bangladesh  ny Bangladeshita, fampisehoana fitadiavam-bola nokarakarain'ilay mpitendry gitara mpitarika ny Beatles, George Harrison sy ilay Indiana mpifehy ny sitar Ravi Shankar tamin'ny 1 Aogositra 1971 tao amin'ny Zaridaina Sokeran'i Madison tao an-tanànan'i New York. Ny kaonseritra dia natao hanairana ny sain'ny iraisam-pirenena amin'ny ezaka fanampiana ara-bola ho an'ireo mpitsoa-ponenana avy ao Pakistana Atsinanana ( Bangladesh ankehitriny), taorian'ny fandripahana nataon'ny tafika Pakistaney sy ny mpiara-miasa aminy nandritra ny ady ho fanafahana an'i Bangladesh . Olona mitotaly 40.000 no nanatrika ny fampisehoana, ary teo amin'ny 250.000 dolara Amerikana teo no voahangona hanampiana an'i Bangladesh. Fiverenan'i Bon Dylan  teo amin'ny fampisehoana ihany koa izany taorian'ny taona vitsivitsy tsy niakarana an-tsehatra noho ny fianjerany tamin'ny môtô.
Ity lahatsary misy an'i Bob Dylan manao fampisehoana tamin'ny kaonseritra ho an'i Bangladesh:
Tanvir Haider Chaudhury  avy ao Bangladesh, namoy ny rainy nandritra ny ady, ary nanoratra tamim-pifaliana tao amin'ny Facebook hoe:
Mahatsapa hafaliana feno adalana tamin'ity vaovao aho- tahaka ny hoe nahazo izany [Nobel izany] ny olona ao anatin'ny fianakaviako na ny olona tsy foy, namana taloha. Mahafinaritra ry Bob.
Niarahaba azy tao amin'ny Twitter ny Bangladeshita hafa:
Miarahaba an'i Bob Dylan, tena naman'i Bangladesh.
Arahabaina nahazo ny loka Nobel! Bob Dylan, tena naman'i Bangladesh. ♥♥♥ Fitiavana avy aty Bangladesh
Avy ao Nepal, naneho hevitra ny mpisera Twitter:
Faly tanteraka fa nahazo ny Loka Nobel-n'ny Literatiora i Bob Dylan; mpankafy hatrany ny tononkirany mahery vaika & mahery setra matetika. Mendrika azy izany.
Alin'i Dylan ity ry aiko, ary tsy misy na inona na inona mahasakana ny “Rivo-doza”. Arahabaina ny @NobelPrize  tamin'ity safidy mahafinaritra ity.
Tsy mahagaga raha misy mandresy lahatra fa izy no iray amin'ireo olo-malaza goavana indrindra eo amin'ny tantaran'ny kolontsaina pop – mahahoatra tsara ny sisintany iraisampirenena ny sangan'asany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/17/90114/
 Bob Dylan no nahazo ny loka Nobel ho an'ny Literatiora 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
 Rabindranath Tagore: https://en.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
 Blowin’ in the Wind: https://en.wikipedia.org/wiki/Blowin%27_in_the_Wind
 The Times They are A-Changin’: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Times_They_Are_a-Changin%27_(song)
 Fampisehoana ho an'i Bangladesh: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concert_for_Bangladesh
 fandripahana : http://www.genocidebangladesh.org/
 ady ho fanafahana an'i Bangladesh: https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War
 Fiverenan'i Bon Dylan: http://www.rollingstone.com/music/videos/flashback-bob-dylan-returns-to-the-spotlight-at-the-concert-for-bangladesh-20121214
 olo-malaza goavana indrindra eo amin'ny tantaran'ny kolontsaina pop: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/70-reasons-why-bob-dylan-is-the-most-important-figure-in-pop-culture-history-2286368.html